Barcelona Oo Kula Tartameysa Chelsea Daafaca Sevilla Jules Kounde?
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo kula Tartameysa Chelsea Daafaca Sevilla Jules Kounde?
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay isku keento soo jeedinta saxiixadaafaca Sevilla Jules Kounde .
Hadii la rumeeyo wararka, kooxda reer Catalan ayaa mar hore ogolaatay inay beeca xorta ah kula soo wareegto daafaca dhexe ee Chelsea Andreas Christensen , taasoo sare u qaadaysa dookhyada Xavi ee dhexda daafaca.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay AS , tababaraha Barcelona ayaa weli doonaya inuu keeno magac kale oo sarre, Kounde ayaana ku jira liiska ugu sarreeya.
Halka Chelsea ay ugu cad-cadahay saxiixa xiddiga heerka caalami ee dalka France si ay ugu buuxiso booska Christensen, warbixinta ayaa sheegeysa in Barcelona ay diyaar u tahay inay sameyso hal abuur si ay ugu sii jirto tartanka loogu jiro saxiixa 23 sanno jirkaan.
Iyadoo og in aysan la mid noqon karin Blues marka ay timaado dalab dhaqaale, Barcelona ayaa dooneysa inay ugu yaraan hal ciyaaryahan ku darto hindise kasta, oo uu ku jiro ciyaaryahanka garabka midig ee Sergino Dest .
Agaasimaha ciyaaraha ee Sevilla Monchi ayaa laga yaabaa inuu codsado ugu yaraan hal ciyaaryahan oo kale inuu heshiis ka gaaro heshiiska, isagoo ka warqaba in Chelsea ay bixin doonto lacag toos ah.